PressReader - Ilanga: 2018-02-08 - PHANSI AMAPHAPHU NGOZUMA: RAMAPHOSA
PHANSI AMAPHAPHU NGOZUMA: RAMAPHOSA
Ilanga - 2018-02-08 - Izindaba - THANDEKA NGOBESE NONONHLAKANIPHO SHINGA
UMENGAMELI we-African National Congress (ANC), uMnu Cyril Ramaphosa, uthi mawehle amaphaphu ngodaba lokukhishwa kukaMengameli Jacob Zuma kwesokuhola izwe kwazise lolu daba basalusebenza.
Esitatimendeni asikhiphile uMnu Ramaphosa, uthi uyazi ukuthi abantu baseNingizimu Afrika bakhathazekile kakhulu ngokuqhu-bekayo. Uthi bebenomhlangano noMnu Zuma lapho bebexoxa khona izinto eziqondene ngqo nokudluliswa kwamandla nezinto eziphathelene nesikhundla sakhe njengomengameli waseNingizimu Afrika.
“Kulo mhlangano njengoba singafinyelelanga esixazululweni, sivumelane ngokuthi kuhlehliswe owesigungu esiphezulu se-ANC obekufanele ube izolo.
"Lokhu kuzokwenza uMengameli Zuma nami sikwazi ukuphetha izi-ngxoxo zethu bese sibikela inhlangano yethu nezwe ezinsukwini ezizayo," kusho uMnu Ramaphosa.
UMnu Ramaphosa ukhipha lesi sitati- mende nje, uMengameli Zuma uyaqhubeka nomsebenzi wakhe njengenjwayelo njengoba ihhovisi lakhe likhiphe isitatime-nde sokuthi ngoMgqibelo uzoba semcimbini we-Ubuntu Awards eCape Town International Convention Centre.
Lapha kuhlonishwa abantu ababeke elakuleli ebalazweni lomhlaba futhi babeka isithombe esihle ngezwe labo.
UMengameli we-United Democratic Momement (UDM), uMnu Bantu Holomisa, uthi ukube kuya ngeqembu lakhe, ngabe inkulumo kamengameli obekumele ayethule namhlanje ngoLwesine kodwa yahlehliswa - ngenxa yazo belu izinkinga zikamengameli - kayisathulwa nje qobo ngoba vele imosha izizumbulu zemali.
“Vele lesi yisikhathi lapho iqembu elibuzayo elisebenzisa khona le nkulumo ukukhuluma izindaba zalo ezingasithinti thina.
"Into engadli mali nengicabanga ukuthi kufanele kuvele kwenziwe yona, yinkulumo yesabelomali ngoba kakukho mali echithekayo uma kwenziwa yona. Kakufani nenkulumo kamengameli ebhekiswe esizweni edla iphalamende imali engaphezulu kuka-R4 million,” kusho yena.
*Bheka ekhasini 14
ISITHOMBE NGABE: DAILYMAVERICK
UMNU Ramaphosa uthi amaphaphu phansi, usaxoxa noMnu Jacob Zuma mayelana nekusasa lakhe ekuhole izwe.